Dyslexia waxay saamaysaa kumanaan arday ah oo dhigta jaamacadaha Faransiiska. Naafadani waxay la xidhiidhaa fudaydka iyo kartida ay u leeyihiin shakhsiyaadka inay wax akhriyaan waxna qoraan, taaso ka dhigaysa caqabad - laakiin aan xad lahayn - ee awooddooda inay wax ku bartaan goobta. Macallinka tacliinta sare wuxuu si fudud uga qaybqaadan karaa kaalmaynta dysleksi, isagoo shardi ku ah inuu si fiican u ogaado dabeecadda naafadan iyo hababka kala duwan ee lagu taageero xanuunkan.
Koorsadayada "Ardayda Dysleksigu ee hoolka muxaadaradayda: Fahamka iyo caawinta", waxaan rabnaa inaan ku barano dysleksi, maamulkeeda medico-social iyo saamaynta uu xanuunkani ku yeelan karo nolosha jaamacadda.
Waxaan eegi doonaa hababka garashada ee ciyaarta dysleksi iyo saamaynta ay ku leedahay shaqada iyo waxbarashada tacliinta. Waxaan sharxi doonaa daaweynta hadalka ee kala duwan iyo imtixaannada qiimeynta neuro-psychological ee u oggolaanaya takhtarka inuu sameeyo ogaanshaha oo uu tilmaamo astaanta shaqsi kasta; Talaabadani waa lama huraan si uu ardaygu si fiican u fahmo khalkhalkiisa una meel dhigo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah guusha naftiisa. Waxaan kula wadaagi doonaa daraasado ku saabsan dadka waaweyn ee qaba dysleksi, iyo si gaar ah ardayda qaba dysleksi. Ka dib dood aan la yeelanay xirfadlayaal taageero oo ka socda adeegyada jaamacadda si loo sharaxo kaalmaynta adiga iyo ardaydaadu diyaar u tahay, waxaanu ku siin doonaa furayaal aad ku waafajiso waxbaridaada naafada aan muuqan.
Ardayda dyslexic ee hoolka muxaadaradayda: fahamka iyo caawinta Diisambar 9, 2021Tranquillus
READ Maamulaha Sare: Fulinta cilad-istaraatiijiyadeed
horeKhatarta nafsiga ah
socdaLaga soo bilaabo hal-abuurka ilaa hal-abuurka
Hawlgabka beeraha: korodhka laga bilaabo Noofambar 1, 2021